shankalay13: June 2009
အချစ်ရဲ့. . . . လွမ်းရက်များ
ဗေဒင် (၀ါ) စိတ်ခန့် မှန်းခြင်း
အချစ်နဲ့ဘ၀
ငါ့ရဲ့ငါ
ကျနော်နှင့် ကျနော့် ချစ်သူ
ထမင်းဝိုင်းက သားပြောတဲ့ စကား
ကြယ်တစ်ပွင့် နှင့် ဘ၀၊ အချစ်
လမ်းခွဲချိန်မှာ မင်းမနှုတ်ဆက်ပါနဲ့ 
လွမ်းလို့ ငိုလဲ မင်းရင်ထဲမှာပဲ
အနမ်းပွင့်လေး ငါ့ပါးမှာ မချွေပါနဲ့ 
နောင်အခါ တွေ့ ချိန်လေးမှာ
ပေးဖို့ ထား ထားပါ။
အချစ်အကြောင်း သောင်းပေါင်းမပြောပါနဲ့ 
မင်းနဲ့ သာ ငါကလက်တွဲမှာလေ။
မိုးတွေသွန်းလို့ဖြိုးခဲ့ရင်လဲဘဲ
နိမိတ်မကောင်း ကံမကောင်းတတ်တယ်လို့ 
မိုးကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့ ။
ကြယ်တွေကြွေတိုင်း ဆုမတောင်းပါနဲ့ 
ငါကြည့်ဖို့ကြယ်လေးတွေ
နေပူတိုင်းလဲ မင်းဝမ်းနည်းပါနဲ့ 
အဲဒါမှ ဘ၀ကို ငါပိုနားလည်မှာပေါ့။
အချစ်ပြောင်းရင်လဲ အသစ်က အဟောင်းထက်သာတယ်လို့ 
ငါ့မျက်နှာကိုတော့ မမြင်ယောင်ပါနဲ့ ။
ငါနဲ့ မရလို့သားသမီးမွေးခဲ့ရင်လဲ
ငါ့နာမည်ပေးလို့အလွမ်းဖြေမနေပါနဲ့ ။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:33 AM No comments:
Sorry ဗျာ...ခင်ဗျားမှာတဲ့ Pizza ကို email နဲ့ ပို့ လို့ မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။
မင်းကို ငါက download လုပ်ပြီးရလာတာ မဟုတ်ဘူး။ မွေးထားတာ ဟဲ့။
ဘာ... အိမ်စာစစ်ဖို့မင်းရဲ့homepage မှာ သွားကြည့် ရမယ် ဟုတ်လား ?
Romeo နဲ့Juliet က online တက်ရင်း Chat Room မှာ တွေ့ တာလေ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ရဲ့အချစ်ကံခေတော့ Juliet's hard drive ပျက်သွားချိန်မှာ သူတို့ အချစ်လဲ ပျက်သွားတယ်ကွယ်။
၂။ မင်းနာမည်ရဲ အစစာလုံးကဘာလဲ?
၄၊ မင်း အဖြူရောင် ။အနက်ရောင် ဘယ်အရောင်ကိုပိုကြိုက်သလဲ?
၆၊ မင်းအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး NO ?
၈။ မင်း ရေကန် ကိုကြိုက်လား ။ ပင်လယ်ကိုကြိုက်လား?
နံပါတ် 1) အနီ - မင်းဟာတက်ကြွတယ် ။ မင်းရဲ့ဘ၀ဟာ အချစ်တွေနဲ့ပြည့်နေမယ်
အနက် - မင်းဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာကြိုက်တယ် ။မင်းဟာရန်လိုတယ်
အစိမ်း- မင်းဟာအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တယ်။ ဘယ်တော့မှမပူပင်ဘူး
အပြာ -မင်းဟာသဘာဝဆန်တယ် ။မင်းဟာမင်းချစ်တဲ့သှူဆီကအနှမ်းကိုနှစ်သက်တယ်
မင်းရဲ့နာမည်က A _ K အတွင်းဆိုရင် မင်းရဲ့ဘ၀မှာ ချစ်သူတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးရှိမယ်
မင်းရဲ့နာမည်က L _ R အတွင်းဆိုရင် မင်းရဲ့ဘ၀မှာပျော်ရွှင်ဖို့ မင်းကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ် ၊မင်းဖြစ်ချင်တဲ့ဘ၀မကြာခင်ဖြစ်လာမယ်
မင်းရဲ့နာမည်က S _ Z အတွင်းဆိုရင် မင်းကသူများကိုကူညီရတာကြိုက်တယ် ၊ မင်းရဲ့အနာဂတ်အချစ်ခရီးလမ်းက အရမ်းကောင်း တယ်
၃ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေများ
Jan _ Mar ဒီနှစ်ဟာမင်းအတွက်အားလုံးကောင်းတယ် ။မင်းအရမ်းချစ်တဲ့သူကိုမမျော်လင့်ဘဲ တွေ့ လိမ့်မယ်
April _June: မင်းအ၇ူအမူးအချစ်နဲ့တွေ့လိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် အချိန်ကြာကြာတော မဟုတ်ဘူး ၊ ဒါပေမယ့် မင်းတဘ၀လုံးအမှတ်ရနေမယ်
July_Sep : ဒီနှစ်ဟာမင်းအတွက်အလွန်ကောင်းတယ် ၊ မင်း ဘ၀မှာကောင်း တဲ့ပြောင်းလဲမှူတွေကိုတွေရလိမ့်မယ်
Oct _ Dec : မင်းကြိုက်တဲ့ဘ၀ က သိပ်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး၊ဒါပေမယ့်မင်းလိုချင်တဲ့ဘ၀မျိူးကိုမင်းရမယ်
အနက် - မင်းဘ၀မှာ မတူညီတဲ့လမ်းတွေ ကိုသွားရမယ် ၊ အဲ့ဒီလမ်းတွေကိုသွှားတဲ့အချိန် မှာမင်းအတွက်အခက်အခဲတွေတွေ့ မယ်
အဖြူ - မင်းသူငယ်ချင်းကသူလျို့ ဝှက်ချက်တွေကိုထုတ်ပြောရလောက်အောင်မင်းကိုယုံကြည်မယ်။ မင်အတွက်ဘာမဆိုလုပ် ပေးလိမ့်မယ်၊ မင်းကဒါကိုမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေမယ်
လေယာဉ် - မင်းဟာစွန့်စားရတာကိုကြိုက်တယ်
ကား - မင်းဟာအေးအေးသမားဖြစ်တယ်
ရေကန် -မင်းဟာသူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ချစ် သူ ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်။ မင်းဟာသူများကိုဦးစားပေးတယ်
ပင်လယ်- မင်းဟာသဘာဝကျ ကျနေတယ် ၊ လူတွေကိုကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှူတွေပေးတယ်
ဖော်ပြသူ။ ။ ရှမ်းကလေး ( email မှရသောစာအားပြန်လည်၍ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ )
Posted by Shankalay or Sai Sai at 3:53 AM 1 comment:
သ၀န်တိုတာ အရမ်းချစ်လို့ 
သူ့ ကိုချစ်လို့ဖြစ်တာပါ
ရေးသူ။ ။ လိပ်ကလေး
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:59 AM No comments:
သူ့ ကိုကိုယ်တွေး ကိုယ့်နှလုံးမှာ
ထင်ကျန်နေသာ သူ့ ပုံရိပ်ပါ။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:31 AM No comments:
အရွယ်ရောက်တော့ စဉ်းစားတာ အချစ်
လူ့ အဖြစ်က အချစ်သားကောင်လား။
ရက်များပြောင်းလို့နှစ်တွေကျော်ခဲ့လည်း
အချစ်အချစ်နဲ့ငါ့ရက်တွေကုန်ခမ်း
လူသာပမ်းလို့အချစ်နောက်လိုက်နေ။
အချိန်ညောင်းလို့သူစိတ်ပြောင်းချိန်မှာ
ငါ့ဒူးငါဖက်လို့ငါ့မျက်ရည်များသာ
တစ်နေ့ နေ့ မှာ ငါလဲခံစားရမှာလေ
တွေးရင်းတွေးရင်း ခါးသီးလွန်းလို့ 
ဖြစ်သမျှကို ကံသာပုံလို့ 
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:38 AM No comments:
စိတ်ညစ်စွာနဲ့ငါကကျောခိုင်း
ငါ့ရဲ့ စကား လူများမသိ
ငါ့ရဲ့ လူသား စဉ်းစားမရ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ ရင်ဝယ်ပိုက်လို့ 
Posted by Shankalay or Sai Sai at 7:30 AM No comments:
ရင်းနှီးဆက်ဆံ အပျိုနဲ့ တော့
အော် ခုတော့ ငါသိရှိခဲ့ပြီ။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:01 AM No comments:
မင်းမျက်နှာလေး အပြုံးတွေနဲ့ 
မင်းစိတ်များ ပြောင်းသွားမလား ?
မေးခွန်းတွေနဲ့ရန်ဖြစ်တော့လည်း
ငါ့နံဘေးမှာ အဖေါ်ဆောင်လို့ 
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:48 AM No comments:
မိုးတွေသွန်းလို့အေးချမ်းတဲ့ခါ
အော် မင်းလေးက ချစ်စရာပေါ့။
ရက်တွေပြောင်းလို့ခွဲသွားတဲ့ခါ
ငါ့နဲ့ အတူ ၀မ်းနည်းနေလား
ပြန်တွေ့ ချိန်လေး ရှိခဲ့ရင်လည်း
၀မ်းသာလွန်းလို့သွန်းဖြိုးမလား
ချစ်သူလေးများ အေးချမ်းဖို့ ရာ။
တမ်းတလွန်းလို့အလွမ်းတွေဝေ
တမ်းတလွန်းလို့လွမ်းနေတယ်နော်။
တ သသနဲ့ကြည့်တဲ့မျက်နှာ
ဝေးကွာသွားတော့ တ သသနဲ့ 
တ စတတ်'တစ်' ချစ်မိတယ်နော်
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:30 AM No comments:
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလို့ 
တို့ တွေ ပြန်တွေ့ ကြတဲ့အခါ
တိတ်ဆိတ်စွာ မျက်ရည်တွေနဲ့ 
မင်းကို ဘယ်လို နှုတ်ဆက်ရမလဲ
ရေးသူ။ ။ ဘိုင်ရွန်
Posted by Shankalay or Sai Sai at 6:27 AM No comments:
လာလည်ကြသော မိတ်ဆွေများအား အထူးတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ ကျနော်တင်ထားသော သီချင်းများမှာ အလုပ်မလုပ်သဖြင့် ကျနော်ကျိုးစားကာ ပြင်နေပါသည်။
ရှမ်းကလေး နှင့် လေပြေ
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:22 AM No comments:
မေ့ဆေးပျယ်လို့နိုးထလာတဲ့အချိန်မှာ သူ ဘေးဘီ ဝဲယာကို ဝိုက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သူက လူနာအိမ်ဆောင်ခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ ရှိနေပြီး သူ့ နံဘေးမှာ သူနာပြုဆရာမတစ်ယောက် ရပ်စောင့်နေတာ တွေ့ လိုက်ရတယ်။ ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ အစစအရာရာ ချောချောမောမော ရှိခဲ့ရဲ့လားလို့သူက မေးပါတယ်။
“ကျွန်တော်က အမြဲတမ်း လွဲလွဲလေးတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရသူဆိုတော့ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကြောက်တယ်ဗျ” … လို့ အစချီပြီး သူ့ ကို မွေးစကတဲက လွဲမှားခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းတွေကို စီကာပတ်ကုံး ပြောပြပါတော့တယ်။
သူ့ ကိုမွေးတဲ့ ဆေးရုံမှာ ကလေးချင်းမှားမိလို့သူ့ အသက် ဆယ်နှစ်သားလောက်အထိ အာရှသား လင်မယားကို သူ့ မိဘလို့ ပဲ မှတ်ယူခဲ့ရတယ်တဲ့။ သူ့ မိဘဆိုသူတွေကလည်း သူတို့ ရဲ့ ကလေးဟာ ဘာလို့အသားတွေ ဒီလောက်ဖွေးပြီး rျက်လုံးဒီလောက် ပြူးရသလဲ ဆိုတာကို အဲဒီတုန်းက ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို့ မတတ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့။ နောက်မှ ကလေးချင်းမှားမှန်း သိပြီး သူ့ ကို သူ့ ရဲ့ မိရင်းဖရင်းတွေဆီ ပြန်သွားပို့ ပေးကြသတဲ့။ အတိအကျပြောရရင်တော့ သူ့ မိခင်ဆီပြန်ပို့ ပေးတာပါ။ သူ့ အဖေက သူ့ အမေကို နှစ်အတော်ကြာကြာကတည်းက ပစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဥရောပသူ သူ့ မိန်းမက တရုတ် ရုပ်နဲ့ ကလေးလေး မွေးလာလို့ ပါတဲ့လေ။
“အမှန်က ကျွန်တော့်ကို လောင်ရိုလို့ မှည့်တာ။ အဲဒါ စိစစ်ရေးရုံးရောက်မှ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို လီရီယို ဖြစ်သွားလည်း ကျွန်တော်လည်း မပြောတတ်တော့ဘူး။”
လွဲမှားမှုတွေက အဲဒီမှာတင် အဆုံးမသတ်သေးပါဘူး။ သူကျောင်းတက်တော့လည်း သူ’မကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပစ်မှုတွေအတွက် ခဏခဏ မှားပြီး အပစ်ပေးတာကို ခံခဲ့ရတယ်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကို သူက ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်ပေမယ့် ကွန်ပြူတာက
“ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်ကစပြီး ထူးဆန်းတဲ့ တယ်လီဖုန်းအခွန်တွေကို ဆောင်နေရတယ်ဗျ။ ရှေ့ လတုန်းကဆို တယ်လီဖုန်းခ ငွေ ၃၀၀/- ဆောင်ခဲ့ရတယ်”
မိန်းမရတော့လည်း မှားပြီးရပြန်ရော။ သူ့ မိန်းမက သူ့ ကို တခြားတစ်ယောက်နဲ့မှားပြီး လက်ထပ်ခဲ့တာ။ အိမ်ထောင်ရေးကလည်း အဆင်မပြေပါဘူး။
“သူက တခြားတစ်ယောက်နဲ့မှားပြီးလက်ထပ်ခဲ့တာလေ။ ကျွန်တော့်ကို တကယ်ချစ်တာမှ မဟုတ်ဘဲ။ အဲဒီတော့ သူချစ်တဲ့ သူ့ ချစ်သူဆီပဲ အမြဲတမ်းသွားနေတော့တာပေါ့။”
လူမှားပြီး ခဏခဏ အဖမ်းခံရဖူးတယ်။ သ’ူမယူဖူးတဲ့ အကြွေးတွေအတွက် အတိုးတောင်းတဲ့စာတွေ ခဏခဏရဖူးတယ်။ ဆရာဝန်ကသူ့ ကို အခုလိုပြောတော့ သူပျော်တောင်ပျော်သွားခဲ့တယ်ဆိုပဲ …
ဒါလည်း ဆရာဝန်က သူ့ ကို လူနာမှားပြီး ပြောမိတာတဲ့။ တကယ်က ဘာမှဖြစ်လောက်တဲ့ ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ အူအတက်ပေါက်ရုံကလေးပါ။
“အခု ခင်ဗျားက ကျွန်တော့ကို ခွဲစိတ်ခန်းထဲမှာ ဘာအမှားအယွင်းမှမရှိဘူး ဆိုတော့ ယုံရခက်ခက်ပေါ့ဗျာ”
ဒီမှာတင် ပြုံးပြီးနားထောင်နေတဲ့ သူနာပြုဆရာမလေးရဲ့ မျက်နှာဟာ တမဟုတ်ချင်း ငြှိုးကျသွားပါတယ်။
ရှမ်းကလေး။ ။ အီးမေးလ်မှ စာအားပြန်၍ တင်ပြပါသည်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 9:55 PM No comments:
သူငယ်ချင်3းယောက်သည် အိမ်ထောင်ကျနေသော သူတို့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဆီ ညစာလာစားကြ၏။ လာလည်သော သူငယ်ချင်းများက အိမ်ရှင်၏သားစကားသိပ်မပြောသည်ကို တွေ့ သောအခါ....
သူငယ်ချင်း။ ။ ဟေ့ မင်းသားက သိပ်စကားမပြောပါလားကွ။
သူငယ်ချင်းသား။ ။ ကျနော်က ရှက်တတ်တယ်ဗျ။ ဒါကြောင့်မို့ စကားသိပ်မပြောတာဗျ။
သူငယ်ချင်း။ ။ ဒါဆိုရင် မင်းအမေ ပြောတတ်တဲ့စကားကို ပြောပါလားကွ။ ငါတို့ ကြားချင်လို့ ပါ။
ထိုအခါ သူငယ်ချင်းသားက သူ့ မေပြောသော စကားကို ပြန်ပြောသည်မှာ
သူငယ်ချင်းသား။ ။ ဟွန်း ဒီကောင်တွေကို အချိန်ကုန်၊ ပိုက်ဆံအကုန်ခံ ပြီးဘာလို့ထမင်းခေါ်ကျွေးနေလဲမသိဘူး။ တဲ့
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:57 AM No comments:
ကျိုင်းတုံမှ ပြန်လာသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကသိရသည်မှာ ယခုတွင် ကျိုင်းတုံ၌ ရထားဘူတာအာ3းနှစ် စီမံကိန်းဖြင့် ဆောက်လုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။
ထိုရထားဘူတာအား ကျိုးတုံကောလိပ်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် နေရာတွင်ဆောက်လုပ်နေပြီး ထိုနေရာ အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ လယ်မြေများမှ စိုက်ထားသောစပါးများကို ရိတ်သိမ်းခွင့်ပင်မပေးပဲ မြေဖို့ လိုက်သည်။
ထိုနေရာတွင်နေသော လယ်သမားများသာ ဒုက္ခရောက်သည်မဟုတ်ပဲ ရထားဘူတာဆောက်ရန်အတွက် စီးဆင်းနေသော နမ့်ခိန်ချောင်း ကိုပါ မြေဖို့ လိုက်သဖြင့် ထိုချောင်းကို မှီခိုကာ လယ်မြေလုပ်ကိုင်နေသော လယ်သမားများအားလုံးလိုလိုပင် အခက်တွေ့ နေရပါသည်။
ထိုနည်းသူစွာ ဘူတာဆောက်သော နေရာနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ တောင်များကိုလည်းဖြိုလိုက်သဖြင့် လေအရမ်းတိုက်သည်ကို အနီးတစ်ဝိုက် နေထိုင်သူများ ကြုံတွေ့ နေရပါပြီး သူခိုးပေါများခြင်းကိုပါ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
ဘူတာဆောက်သောအလုပ်သမားများသည် အထက်ပိုင်းမှလာသောအလုပ်သမားများဖြစ်ပြီး ဘူတာဆောက်သော အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ပင် မိသားစုများဖြင့် နေထိုင်ကြပါသည်။
ထိုဘူတာပြီးပါက စစ်သားရွေ့ ပြောင်းရန်အလွန်လွယ်ကူမည် အပြင် အထက်ပိုင်းမှ အရှေ့ ပိုင်းသို့လူရွေ့ ပြောင်းမှုများ ပိုမို များပြားလာနိုင်ပြီး အခက်အခဲအမျိုးမျိုး ကြုံတွေ့ နိုင်ကြောင်း။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:30 AM No comments:
အမှတ်မထင် ငါတွေ့ ခဲ့တဲ့တစ်နေ့ 
ရလိုစိတ်နဲ့ငါ့လက်ကို ငါဆန့် တန်း
ဆက်လက်လို့ သာ တောက်ပနေစဲ။
ကောင်းကင်က ငါ့ထက်ပိုမြင့်နေလို့ 
ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ငါ
ကြယ်ကို ဥပက္ခာပြုလို့ 
ကျောခိုင်းခဲ့တယ် ယနေ့ ထိ။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:23 AM No comments:
(လေးပုံ တစ်ပုံလောက်တွင်မှ အသံထွက်သည်။ )
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:48 AM No comments:
စကားလုံးတွေနဲ့အပြစ်ဖွဲ့ ကာ
သူ့ ကိုစိတ်ညစ် ဖွယ်လည်းဖြစ်။
ထပ်တွေ့ ရန်မှာ ခက်လိမ်းမည်။
သိပ်ချစ်တယ် ငါလေသူ့ ကို။
သူနဲ့ ဝေးဖို့ စဉ်းစားတိုင်း
သူပျော်ရွင်စေဖို့ရည်။
Posted by Shankalay or Sai Sai at 5:40 AM No comments:
လူချောလေးတစ်ယောက်မှာ ချစ်စခင်စ ကြင်နာစ ရည်းစားအသစ်စက်စက်လေး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့အသဲလေး မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရဖြစ်အောင်…ဘာလက်ဆောင်ပေး ရင်ကောင်းမလဲလို့ အသည်းအသန်စဉ်းစားရပါတော့တယ်။
သူ့အချစ်လည်း ပေါ်လွင်ရမယ်။ သူမအတွက်လည်း အသုံးဝင်ရမယ်။ အမှတ်တရနဲ့ ဂန္ဓ၀င်လည်း မြောက်ရမယ်ပေါ့။
နောက်ဆုံးအကောင်းစား လက်အိတ်ဖြူဖြူလေးတစ်စုံဝယ်ဖို့ကြည်နူးစွာဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ မိန်းမအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းဆိုင်ကိုသွားမှာမို့ ချစ်သူရဲ့ညီမလေးလည်းပါလာတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် လှလှလေးပါပဲ။
ဆိုင်ရောက်တော့ သူကလက်အိတ်အဖြူလေးတစ်စုံ ၀ယ်တယ်။ ချစ်သူ့ညီမလေးက အောက်ခံဘောင်းဘီ (ပင်တီ) တစ်ထည်ဝယ်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ထုပ်ပိုးပေးတဲ့အရောင်းစာရေးမ အမှားကြောင့် ချစ်သူ့ညီမကလက်အိတ်ရသွားတယ်။
သူလည်း ဖွင့်စစ်ဆေးမနေဘဲ (ပင်တီ) ပါဆယ်ထုတ်နဲ့ စာတစ်စောင်ရေးပြီးစာတိုက်ကပို့လိုက်တယ်။
ကိုယ်ဘာလို့ ဒီလက်ဆောင်ကို ရွေးချယ်ရသလဲဆိုတော့ မင်းနဲ့ကိုယ် ညနေခင်းတွေ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါ မင်းဝတ်လေ့ဝတ်ထ မရှိဘူးဆိုတာ ကိုယ်သတိပြုမိလို့ပဲ။ ကိုယ်ကနှိပ်ကြယ်သီးပါတာ ၀ယ်ဦးမလို့ပဲ။ မင့်ညီမက ချွတ်လို့စွတ်လို့လွယ်အောင် အဲ့ဒါကိုပဲ ၀ယ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်။ ဟုတ်တယ်…သူစွပ်ပြချွတ်ပြတယ်…လှလိုက်တာလေ။
အရောင်းစာရေးမကတောင် သူမလည်းဒါပဲ ၀တ်ကြောင်းနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ဝတ်ပြချွတ်ပြသေးတယ်။ အတော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ သူမက အပေအစွန်းလည်း ရေဆေးရုံနဲ့ ပြောင်ကြောင်းအာမခံတယ်လေ။ ဒီတစ်ခါ ကိုယ်လာရင် မင်းဝတ်ထားတာ မြင်ချင်တယ်။ တွေ့ရင်တော့လား အထပ်ထပ်အခါခါနမ်းပစ်မိမှာပဲ။
သောကြာနေ့မှာ ကိုယ်နမ်းဖို့ ဆက်ဆက်ဝတ်ထားနော်…နော်…
တင်ပြသူ။ ။ ရှမ်းကလေး (Email မှစာအားပြန်၍တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
အတွေးပျက်လို့ပြန်ခဲ့တော့ပေါ့
နောက်တော့ ငါ သံဝေဂရ
လက်ထပ်ဖို့ တော့ ငါရည်ရွယ်
ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားရင်း
အော် မင်းနဲ့ ငါဝေးလဲ
အတွေးတွေနဲ့နီးစပ်လို့ 
လမင်းကြည့်တိုင်း မင်းကြည့်မယ်လို့ 
မင်းနဲ့ ငါ နဲ့ 
တစ်မိုးအောက် ထဲမှာရှိနေလို့ 
ကလေးသုံးယောက်သည် သူ့ အဖေကတော်သည်၊ ငါ့ အဖေကတော်သည်နှင့် ပြိုင်နေကြသည်။
ပထမကလေး။ ။ ငါ့ဖေက သူသေနတ်ပစ်လိုက်ရင် ကျဉ်ဆန် ပစ်မှတ်မရောက်ခင် သူက အရင်ရောက်နေတာကွ။
ဒုတိယကလေး။ ။ ဟာ မင်းအဖေလောက်ကတော့ ငါ့အဖေက သနားသေးတယ်ကွ။ ငါ့အဖေဆိုရင် သူ့ ပေါင်ကြားကို ကျောက်ခဲနဲ့ 
ဘယ်လောက်ထုထု မမုဘူးငါ့မောင်။ (ရိုင်းသည်ဟု မထင်လို ဟာသသာ)
တတိယကလေး။ ။ ဟိုး မင်းတို့ အဖေလောက်ကတော့ ငါ့အဖေက ကလေး ကစားစရာပဲမှတ်တယ်တယ်ကွ။ မင်းတို့ မသိသေးလို့ ၊ ဒီမှာ ငါ့အဖေဆိုရင် ငါငယ်ငယ်ထဲက ရေငုတ်လိုက်တာ ခုထိတောင် အသက်မရှူပဲ အောက်မှာ နေ၊နေတုန်းပဲကွတဲ့
ရှမ်းကလေး (ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ထားသော ဟာသများအား ပြန်၍တွေးတော တင်လိုက်ပါသည်။ )
Posted by Shankalay or Sai Sai at 8:54 AM No comments: